Akụkọ - A na-eji ntụ ọka na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ ụgbọ ala
Ntụ ntụ metallurgy ngwaahịa eji na akpakanamde ụlọ ọrụ
Ngwaahịa metallurgy ntụ ntụ eji arụ ọrụ n'ime ụgbọ ala bụ ngwaahịa nwere ọdịnaya sayensị na teknụzụ dị elu, nke nwere ike belata ịdị arọ nke ụgbọ ala ma belata ọnụahịa nrụpụta, ma nwee uru nke ịmetụta ngwaahịa ụlọ ọrụ ụgbọ ala.
Ka ọ dị ugbu a, enwere ihe karịrị ụdị ọla ntụ 400 nke eji arụ ọrụ n'ụgbọ ala n'ụwa.
Dika ihe eji eme udiri ihe eji emeputa ihe n 'azu, uzu ahia nwere uru na nchekwa, nchekwa ihe, nchedo gburugburu ebe obibi, onodu aku na uba, oru oma na otutu ndi ozo, ma ndi oru di iche
Mara ma jiri ya mee ihe; Karịsịa, ngwa na mmepe ngwa ngwa nke ihe eji arụ ọrụ ụgbọ ala na-akwalite ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ntụ ntụ n'ime ụzọ mmepe ngwa ngwa.
Iji chọpụta ngwa ngwa na mmepe mmepe nke teknụzụ na-arụ ọrụ igwe na ngwaahịa na ụlọ ọrụ ụgbọ ala, onye nta akụkọ ahụ gbara ajụjụ ọnụ Prọfesọ Han fenglin, onye ndụmọdụ ọkachamara nke otu ndị otu na-ahụ maka igwe na-ahụ maka igwe na-arụ ọrụ na China.
China nwere nnukwu ikike maka mba ụwa
Prọfesọ Han kwupụtara na ntụ ntụ ntụ na-adabere na ngwongwo ntụ ntụ, na-akpụ - na-emepụta ngwaahịa ndị na-emepụta ígwè nke teknụzụ ọla ọhụụ ọhụrụ. 1940, United States
Otu nnukwu ụlọ ọrụ ụgbọala agbanweela mmanụ mgbapụta mmanụ niile ka ọ bụrụ ntụ ntụ, site na mgbe ahụ gaa na ntụ ntụ metallurgy akụkụ gbanyere mkpọrọgwụ na ụlọ ọrụ ụgbọ ala.
Dị ka data si kwuo, na 2006, ngụkọta nke mmepụta akụkụ ntụ ntụ na China bụ 78.03 nde tọn, otu n'ime ha mmepụta nke akụkụ metallurgy ntụ maka ụgbọala ruru 28.877 nde tọn.
N'ihe banyere nkezi nke ihe PM nke eji ihe ọkụ (gụnyere ụgbọala), nkezi nke ihe PM nke eji na ụgbọ ala bụ 3.97 n'arọ na 2006, ma e jiri ya tụnyere nke ahụ na Japan.
8.7kg, ma e jiri ya tụnyere 19.5kg na North America. Tụkwasị na nke ahụ, ụlọ ọrụ ụgbọala na-emeghe ugbu a maka mmepe nke akụkụ ntụ maka ntụ maka akụkụ ngwa, n'ozuzu akụkụ engine nke 16 ~ 20 n'arọ, na-agbanwe
Akụkụ ọsọ bụ kilogram 15 ~ 18, akụkụ akụkụ breeki bụ 8 ~ 10 n'arọ, ndị ọzọ bụ kilogram 7 ~ 9. Enwere ike ịhụ na China nwere nnukwu ikike azụmaahịa maka ịmepụta akụrụngwa akụrụngwa.
Powder metallurgy akụkụ nwere ike belata ọnụ na ibu
N'ikwu okwu banyere mmepe na ọnọdụ dị ugbu a nke imepụta ihe eji arụ ọrụ, Prọfesọ Han kwuru na akụkụ ntụ a na-eji arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na -emepụta mmanụ na -emepụta mmanụ na ntụ.
Metallurgical bughi akụkụ, nke mbụ na-tumadi na-emepụta site 90Cu-10Sn ọla kọpa, nke ikpeazụ na-ihu ọma mere si ígwè ntụ ntụ dị ka isi akụrụngwa.
Ndị na-esonụ bụ ụfọdụ ihe atụ nke ngwa teknụzụ PM: A PM 64 toothed force extractor draịva gia nke na-efu ihe dị ka 40% na-erughị akụkụ nke ígwè, na
Na ezé gia adịghị mkpa nhazi oge; A ntụ ntụ metallurgy ụgbọala ntuziaka nnyefe synchronizer mgbanaka, jiri ya tụnyere ot mmepụta nke mmekọrịta mgbanaka, nwere ike belata na-eri nke 38%; kinddị
Ike kachasị nke ntụ ntụ na-arụ ọrụ mejupụtara mbara ala bụ 40% dị elu karịa nke nkedo a na-agbazi ígwè, ebe ọnụ ahịa na-ebelata karịa 35% ...
Dị ka a pụrụ ịhụ site na ụdị abụọ nke PM nke meriri akara dị iche iche, ọ dịkarịa ala atọ n'ime ha ji teknụzụ nhọrọ ahọpụtara wee rụọ abụọ n'ime ha na teknụzụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ.
Emepụtara, ụdị 6 dị iche iche nwere ihe karịrị 2 akụkụ dị iche iche, na nchikota nke akụkụ nke otu kachasị nwere akụkụ ntụ ntụ 18.Professor Han kwuru, nke a
Akụkụ ụfọdụ na-emeri mmeri na-egosi na akụkụ PM agaghị enwe ike dochie akụkụ igwe iron, akụkụ nchara esororo, ịkpụ ihe eji arụ ọrụ, chekwaa ọrụ, ihe onwunwe, nchekwa ike, belata ọnụahịa mmepụta, mana enwere ike belata
Ihe dị mkpa nke akụkụ ahụ na-enyere aka ụgbọ ala dị mkpa, nke kachasị mkpa bụ na mmepe nke ihe eji arụ ọrụ ntụ, gosipụtara na enwere ike rụpụta akụkụ ụfọdụ site na teknụzụ ọlaọcha ntụ, yana
Ọrụ ọrụ dị mkpa na akụ na ụba.
Ntụ ntụ metallurgy bụ teknụzụ na-emepụta "akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ"
Ka ọ dị ugbu a, a chọpụtawo ntụ ntụ ntụ dị ka teknụzụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma na-adigide na ụlọ ọrụ ahụ. N'akụkụ a, Prọfesọ Han sitere na ọrụ ntụ ntụ na-adigide, ihe nwere ike ijide
Nkwado, nkwado ike, nkwado akụrụngwa, nkwado gburugburu ebe obibi, ọrụ na-adigide, uru uru na-adigide na akụkụ ndị ọzọ na-ewebata.
Dịka ọmụmaatụ, na akụkụ nke ịrụ ọrụ na-adigide, igwe na-arụ ntụ nwere nnukwu ikike na-arụ ọrụ na njirisi ihe eji eme ihe, nke nwere ike ime ka ike zuru ike.
+ nhazi oyi) Nkedo ma ọ bụ ịkpụzi + ịcha nhazi tụnyere ntụ ntụ metallurgy usoro n'ichepụta otu akụkụ naanị mkpa iji ole na ole usoro, nwere ike mezue usoro ọzọ, ihe mgbagwoju anya
Ọrụ dị iche iche.
N'ihe banyere nkwado nke ihe, ikike ikpeazụ nke ikike PM bụ isi uru ya. Dịka ọmụmaatụ, iji mepụta akụkụ ezé, usoro ịkpụchasị usoro ga-eru 40% Akụrụngwa na-aghọ ibe, na 85% nke mkpokọta ntụ ntụ eji na paịlị arụpụta sitere na ihe eji emegharị emegharị. Na usoro mmepụta nke akụkụ metallurgy ntụ, usoro ọ bụla Mfu mkpofu bụ n'ozuzu 3% ma ọ bụ obere, na ọnụego itinye n'ọrụ ihe nwere ike iru 95%.
N'ihe banyere nkwado nke ume, usoro mmepụta ihe dị iche iche chọrọ ọtụtụ usoro kpo oku na ikpo ọkụ iji mepụta. Mgbe a na-emepụta nchara ma ọ bụ ígwè ntụ site na atomization,
Naanị otu ịgba ọkụ nke achọrọ, a na-arụkwa ọrụ ndị ọzọ niile na-ekpo ọkụ na okpomọkụ n'okpuru agbaze agbaze, nke ọ bụghị naanị na-azọpụta ike, kamakwa na-eme ka njedebe ikpeazụ
Na nhazi nke ihe eji eme ihe a choro, ihe omuma. Site n'iji onodu ihe eji eme ihe eji emeputa ihe, achoputara na ike a choro iji meputa uzo di omimi bu -
Pasent iri anọ na anọ nke akụkụ ndị na-arụ ọrụ.
N'ihe banyere nkwado nke gburugburu ebe obibi, n'ihi njirimara nke ike ikpeazụ nke ike metallurgy, n'ozuzu, a na-eme akụkụ ahụ ka ha rụchaa ngwaahịa mgbe emechara, nke enwere ike iburu ya
Mbupu, nnyefe N'ọnọdụ ka ukwuu, ego nke ịcha mmanụ eji arụ ọrụ ngwaahịa PM bụ ihe na-adịghị mma, ọnụọgụ nke mmetọ na-egbu egbu nke ewepụtara site na isi mmalite dịka mmiri jụrụ oyi dị obere
E jiri ya tụnyere usoro nrụpụta ndị ọzọ, ụlọ ọrụ na-arụpụta ihe ọkụkụ nwere obere nsogbu gburugburu ebe obibi.
Ka ọ dị ugbu a, akụkụ ntụ ntụ ntụ abụwo ụdị dị mkpa dị mkpa na ụlọ ọrụ ụgbọ ala. N'ọdịnihu dị nso, ala ndị China ga-eji nke nta nke nta bụrụ ebe kachasị ekesasị ụwa nke ntụ igwe eji arụ ọrụ igwe.